Indawo yokuhlala yaseKhaya kaKayla
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAri
Ifumaneka kuphela imizuzu eyi-10 ukusuka kwi-A. Yani Airport kunye nemizuzu eyi-15 ukusuka kumbindi weSixeko saseSemarang, indawo yethu yezindlu idityaniswe neClubhouse enezixhobo zokubhukuda, iziko lezemidlalo, i-cafe, kwaye kwakhona isondele kakhulu kwiindawo zokutyela ze-instagramable.
njengoMnu. K kunye ne-Gama yokutyela. Ukuba ufuna ukuphumla emva kwemini kunye nosapho kunye neqabane lakho, kukho umbono omhle we-BSB Lake onokuyonwabela.
Ikhaya likaKayla yindawo yokuhlala yabucala kwi-BSB yezindlu zaseCitraland ezinengqikelelo yale mihla kwaye ixutywa nendalo,
Apha unokuziva amava okuhlala kunye nomoya onje ekhaya, uyilo lwangaphakathi lwendlu yethu lukhululekile kwaye lushushu, nokukhanya okuninzi kwendalo ukunika umbono onempilo kunye nokhululekileyo, ungalibali izibonelelo zokugcina izindlu zabahambi esinazo. obalungiselwa nina, ukuqinisekisa ukuba intuthuzelo ngexesha ukuhlala endlwini yethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Ari
Umncedisi wethu wasekhaya uya kukwamkela phambi kwendlu, ngenxa yoko nceda wazise ukufika kwakho iiyure ezi-2 kwangaphambili ukuze silungiselele zonke iimfuno zakho.